Jubbaland oo digniin kasoo saartay dadka loo xiro Shabaabnimo - Awdinle Online
Jubbaland oo digniin kasoo saartay dadka loo xiro Shabaabnimo
Xeer ilaaliyaha guud ee Maamulka Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan ayaa war kasoo saaray fal dambiyeed ka dhalan kara shaqsiyaadka loo xiro kiis dacweedyada kala duwan ee tuhunka ah, kuwaas oo ku jira xarumaha baarista ciidanka ammaanka.
Waxa uu Digniin u diray Ciidamada Booliiska & Nabadsugidda Maamulkaas ee inta badan gacanta ku dhiga kiisaska dadka la tuhmayo ee lagu soo qabto howlgalada kala duwan ay sameeyaan.
“Ciidanka Booliiska & kuwa dambi baarista ayaa xorriyadda ka qaada dadka la tuhmayo oo ay suuragal tahay in waqti dheeraad ah xirnaadaan iyada oo aan warqad xukun suge ah aan loo jarin, sidaas awgeed waa in laga gudbaa arrintaas si loo helo gal dacweed dhameystiran waa in warqad loo jartaa oo caddeyneysa in xukun ay sugayaan” Sidaasi waxaa yiri Xeer ilaaliyaha DG Jubbaland.
Maxamed Sheekh Cismaan Xeer ilaaliyaha guud ee DG Jubbaland ayaa soosaaray Digniin la xiriirta fal dambiyeed ka dhalan kara dadka xabsiyada lagu hayo waqti dheer oo aan loo heysan warqad Maxkamadeed.
Magaalada Kismaayo oo xarun KMG ah u ah DG Jubbaland waxaa si joogta ah uga howlgala Ciidamada ammaanka maamulkaas oo xiray shaqsiyaad intooda badan ku eedeysan Al-Shabaabnimo.
Previous articleKenya oo shuruud ku xirtay inay Ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya
Next articleXOG: Deni oo Imaaraadka Amar culus kasoo siiyay Golihiisa Wasiirada